'राम्रा प्रशिक्षक नहुँदा फुटबलमा पछाडि' | Nagarik News - Nepal Republic Media
'राम्रा प्रशिक्षक नहुँदा फुटबलमा पछाडि'
काठमाडौं- फुटबल, संसारकै लोकप्रिय खेल। नेपालमा पनि यसको लोकप्रियता कम छैन। राष्ट्रिय टोली मैदानमा उत्रँदा नेपाली दर्शक जति उत्साहित हुन्छन्, खेलको नतिजाबाट उत्तिकै निराश पनि।
भर्खरै नेपालले चिर प्रतिद्वन्द्वी भारतसँग अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल खेल्यो, नतिजा फेरि उस्तै। नेपालले भारतलाई २–० को नतिजा सुम्पियो। निरन्तर खस्कँदै गएको नेपाली फुटबलले गत वर्ष समर्थकलाई थोरै भए पनि खुसी दिएको थियो। तर, पछिल्ला केही खेलमा फेरि नेपालको फर्म पुरानै अवस्थामा फर्कियो, हारको शृंखला जोड्दै।
'नेपाली खेलाडीमा क्षमता छ, यसमा कुनै शंका छैन। तर, क्षमता निखार्न राम्रो प्रशिक्षक आवश्यक छ।'
फुटबल लोकिप्रिय हुनुका साथै प्रचुर सम्भावना बोकेको मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा किन खरो रुपमा उत्रन सक्दैन? थुप्रै विदेशी प्रशिक्षकले नेपाली फुटबल प्राविधिक रुपमा निकै राम्रो भएको प्रतिक्रिया दिने गरे पनि किन अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा नतिजा निराशाजनक हुन्छ? यी प्रश्नको उत्त। नेपाली समर्थकले लामो समयदेखि खोजिरहेका छन्।
एक वर्षदेखि एन्फाको प्रविधिक निर्देशकका रुपमा काम गरेका जापानी तोकता चियाकीसँग सोझो जवाफ छ, 'नेपालमा राम्रा प्रशिक्षक नै छैनन्। गुरु नै राम्रो नभएपछि चेलाले कसरी राम्रो गर्न सक्छ?' बिहीबार नेपालस्थित जापानी दूतावासले गरेको अन्तर्त्रि्कयामा चियाकीको प्रश्न थियो।
तीस वर्षदेखि फुटबलमा सक्रिय चियाकीले जापानको प्रसंग कोट्याए। उनका अनुसार चार दशकअघिको जापान र अहिलेको नेपालको फुटबलको स्तर लगभग उस्तै छ। त्यति बेला जापानी फुटबल पनि यस्तै अवस्थामा थियो। १९९८ देखि भने जापान लागातार विश्वकपमा छनोट हुँदै आएको छ। चियाकीले त्यसको रहस्य खोतल्ने प्रयास गरे, 'जापानले प्रशिक्षण प्रणालीमा गरेको परिवर्तन सफलताको मुख्य कारण हो।'
आफूले फुटबल खेल्न सुरु गर्दा राम्रो प्रशिक्षण नपाएको गुनासो गर्दै चियाकीले थपे, 'जापानले १९८० देखि प्रशिक्षण प्रणाली परिवर्तन गर्न खोजिरहेको थियो। आफ्ना प्रशिक्षकलाई विदेश पठाएर त्यहाँको प्रशिक्षण प्रणालीबारे अध्ययन गर्न लगाइयो जुन निकै उपलब्धिमूलक रह्यो।'
चियाकीले जापानी जे लिगको प्रसंग पनि उठाए। 'जे लिगका थुप्रै क्लबमा अहिले विदेशी प्रशिक्षक कार्यरत छन्। विदेशी प्रशिक्षकको काम जापानी प्रशिक्षकले नजिकबाट अध्ययन गरिरहेका छन्। त्यसबाट सिकिरहेका छन्,' चियाकीले भने, 'त्यसले जापानी फुटबलको स्तरवृद्धिमा मद्दत गरिरहेको छ।'
२००२ मा दक्षिण कोरियासँग संयुक्त रुपमा विश्वकप फुटबलको सफल आयोजना गरेको जापान यति बेला टोकियो ओलम्पिक २०२० लाई भव्य बनाउने तयारीमा जुटिरहेको छ। 'स्पोर्ट्स फर टुमारो' नामको परियोजनाअनुरुप जापनले अहिले विभिन्न देशसँग खेलकुद तथा सांस्कृतिक आदानप्रदान गरिरहेको छ।
स्पोटर््स फर टुमारोअन्तर्गत जापानको परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालका पाँच प्रशिक्षकलाई त्यहाँ निम्त्याएको छ, इन्स्ट्रक्टर कोर्स गर्न। जापान फुटबल संघले जुन १२ देखि १९ सम्म गर्ने कार्यक्रममा नेपालका राजेन्द्र तामाङ, यामप्रसाद गुरुङ, मेघराज केसी, नवीन न्यौपाने र सुनील श्रेष्ठले सहभागिता जनाउनेछन्। कार्यक्रममा उनीहरुले जापानको प्राविधिक तथा प्रशिक्षण कला अवलोकन गर्नुका साथै खेलकुद इन्स्ट्रक्टर तालिम लिनेछन्। जुन तालिमबाट उनीहरुले नेपालमा 'सी' लाइसेन्स प्रशिक्षक उत्पादन गर्न सक्ने विश्वास चियाकीको छ।
‘नेपाली फुटबल टोलीलाई अहिले जापानी प्रशिक्षकले प्रशिक्षण गराइरहेका छन् र पहिलाभन्दा सुधार पनि भइरहेको छ,’ चियाकीले दाबी गरे, ‘यसमा सुधार हुँदै जानुपर्छ भन्ने मेरो जोड हो। फेरि पहिलेकै जस्तो भयो भने के गर्नु? मलाई आशा छ, यी पाँच प्रशिक्षकले त्यहाँ सिकेका कुरा नेपालमा कार्यान्वयन गर्नेछन्।’
नेपाली खेलाडीमा क्षमता छ भन्नेमा चियाकीलाई कुनै शंका छैन। ‘त्यसलाई निखार्न राम्रो प्रशिक्षक आवश्यक छ। त्यसैले जापानले झन्डै चार दशकअघि अपनाएको बाटो नेपालले पनि अवलम्बन गर्दा राम्रो हुन्छ,’ खेलकुद निर्देशकले थपे, ‘किनकि जापानी र नेपालीको शारीरिक बनावट मिल्छ। पश्चिमा मुलक स्पेन, मेक्सिकोलगायतका देशका खेलाडीको शारीरिक बनोट पनि हाम्रो जस्तै हो। उनीहरुले विश्व फुटबलमा दबदबा कायम राख्न सक्छन् भने नेपालले किन नसक्ने?’
प्रकाशित: २७ जेष्ठ २०७४ ०७:२७ शनिबार
राम्रा प्रशिक्षक नहुँदा फुटबलमा पछाडि